बिकास थापाको नयाँ कृती 'ओकलेर आगो' कविता संग्रह लोकार्पण, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
बिकास थापाको नयाँ कृती 'ओकलेर आगो' कविता संग्रह लोकार्पण
काठमाडौँ । कविता ,समिक्षा र आख्यानको क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाइसकेका कवि हुन् बिकास थापा। उनको चौथो कविता कृति हो ओकलेर आगो सार्वजनिक भएको छ।
शनिबार काठमाडौँको चर्चित नाट्य घर सर्बनाम थिएटर कालिकास्थानमा एक भव्य कार्यक्रमका बीच ओकलेर आगो कविता संग्रहको लोकार्पण तथा नेपाली कविता बिधाको पहिलो चलदृष्य बुझ्नै सकिन आज तिमिलाईको प्रदर्शनी सम्पन्न भएको हो।
ओकलेर आगो कविता संग्रहका लेखक कवि थापाले यस यस अघि फूलमाथिको जून, मौनताका सुस्केराहरू र दशगजा वरिपरी गरी तीन कविता कृतिहरू प्रकासन भइसकेका छन्।
मानव जीवनका बिविध पक्षमाथि कलात्मक ढंड्गले कलम चलाउने कवि थापाका कविता भित्र दर्शन, दुःख, प्रेम र सिमान्तकृत आवजलाई एक उच्च लयमा शब्दमा उतारेका छन्। यस संग्रह भित्र ५९ वटा कविताहरू समावेश छन्।
बुक सेलरले प्रकाशनमा ल्याएको संग्रहभित्र रहेको एक चर्चित कविता हो “ बुझ्नै सकिनँ आज तिमिलाई“ । उक्त कविता माथि बनेको पहिलो नेपाली कविताको चलदृष्य कवि तथा निर्देशक हेमप्रभासको परिकल्पना र निर्देशनमा उक्त उत्कृष्ट चलदृष्य छायाँकन केही हप्ता अगाडि चोभारमा गरिएको थियो।
वर्तमानमा पल्टिएका स्मृतिका पानाहरूलाई भावनात्मक प्रेम ,बियोगकान्त भाव ,ह्रदयस्पर्शि, मौलिक बिम्वहरूको उत्कृष्ट संयोजन रहेकाले नै नेपाली कविता बिधालाई थप उचाईमा प्र्याउनका लागी नै यो चलदृष्यको निर्माण गरिएको बताउछन् निर्देशक हेमप्रभास । उक्त चलदृष्य केही दिन भित्रमा नै यूट्यूब मार्फत सबैले हेर्न सक्ने गरि सार्वजनिक गरिने छ।
संगीतकार सुदीप सागरको सुमधुर संगित रहेको यस कविताको चलदृष्यको सिनेम्याटोग्रामफर बिरेन्द्र भाट बिपिनले गरेका हुन् भने यसमा नायक पुष्पल खडका र बर्षा शिवाकोटिको उत्कृष्ट अभिनय रहेको छ।
ख्यतिप्राप्त कलकारहरूको साथ र अभिनय रहेको उक्त चलदृष्य युवा कवि, उपन्यासकार, समिक्षक, लेखक ,समालोचक तथा निर्देशक हेमप्रभासले सिनेम्याटिक तरिका अनुसार यसको स्क्रिप्ट तयार पारेका थिए।
कविताको पहिलो सिनेम्याटिक चलदृष्य हेर्न सर्वनाम थिएटरको हल कार्यक्रम सुरुहुनु अगावै साहित्य प्रेमिहरूको बाक्लो उपस्थितिले खचाखच भरिएको थियो। कवि बिकास थापाकी ममतामयी आमा तथा समाज सेवी धनकुमारी थापाको सभाअध्यक्षमा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा कवि प्रोलास सिन्धुलिय, प्रभाति किरण, दयाराम दाहल तथा हेमप्रभासले कविताकृति तथा चलदृष्यमाथि आ(आफ्ना बिचार राखेका थिए।
उक्त कार्यक्रममा आयोजक बुकसेलरले नेपाली कविता बिधाको पहिलो चलदृष्य निर्माण गरी नेपाली कविता बिधालाई नयाँ आयम, उचाईमा र एक फरक बाटो प्रदान गरेको हुनाले चलदृष्यमा अभिनय गर्ने कलाकार नायक पुष्पल खड्का, नायिका बर्षा शिबाकोटी , सिनेम्याटोग्राफर बिपिन भाट, संगितकार असिम सागर,गीतकार तथा सन्चारकर्मि शान्ति प्रिय,निर्देंशक हेमप्रभासलाई ताम्रापत्रले सम्मान गरिएको थियो।
यो नेपाली कविताको क्षेत्रमा पहिलो तथा महत्वपूर्ण प्रयास भएकोले यसले भविष्यमा नेपाली कवितालाई नयाँ सोच ,नयाँ परिकल्पना, नयाँ बाटोमा हिंडाई बिश्व बजारमासम्म लैजाने बाटो खुलाएको छ। तसर्थ प्रकाशक बुकसेलरले उनीहरू सबैलाई सम्मान गरेको बताउछन् कवि प्रोलास सिन्धुलिय।
हाम्रो साहित्यको क्षेत्र परम्परागत सोच भित्रै मात्र अल्झिरहेको अबस्थामा यस्ता प्रबिधि युक्त प्रयास र प्रयोग गर्नाले नेपाली कविता बिधामा भोलिका दिनमा हुने बहसले एक नयाँ धार ,उचाई,भिन्न बाटो र भिन्न दृष्टिकोण स्थापित गर्ने बताउछन् कवि बिकास थापा। यो प्रबिधिको युगमा एक नविन प्रयोग कविता माथि भएको छ। यसले गर्दा नेपाली कविता बिधामा एक नयाँ धार बिकसित हुनपुगेको छ। त्यो हो सिनेम्याटिक कविता। अव आगामी दिनहरूमा कवितालाई पनि आधुनिक तरिकाका गीत जस्तै चलदृष्यमा हेर्न ,बुझ्न र अनुभूति पनि गर्न सकिने छ। यो नेपाली कविता बिधाको लागी नै नयाँ उपलब्धि र थप उर्जा बन्न पुगेको छ।